Ciidamada Somaliland oo la wareegay degmada Taleex ee gobolka Sool • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Ciidamada Somaliland oo la wareegay degmada Taleex ee gobolka Sool
Ciidamada Somaliland oo la wareegay degmada Taleex ee gobolka Sool
April 15, 2014 - By: Abdirizak Shiino
Ciidamada Soomaaliland iyo malayshiyaad taageersan Somaliland oo ka soo jeeda gobolka Sool ayaa goor dhowayd la wareegay magaalada Taleex ee gobolka Sool, kadib markii gelinkii hore ee maanta ay isku fidiyeen deegaano u dhexeeya Xuddun iyo Taleex.
Cismaan Cabdullaahi oo ka tirsan warbaahinta joogana Taleex ayaa Horseed Media u xaqiijiyey in ciidamada Somaliland ay la wareegeen geedka berdaha oo ah halka ay ka dhici jireen shirarka Khaatumo.
Ciidamo tiro badan oo hubaysan ayaa magaalada soo galay, Taleex waxaa ka dhacaysa rasaas ay furayaan ciidamada Soomaliland in kastoo uusan wax dagaal ah ka dhicin degmada,
Shacabka caraysan ayaa ciidamada ka hortegay in kastoo ay rasaaska ku kala cayriyeen.
Wararku waxay sheegayaan in ciidamadii maamulka Khaatumo ay halkaas isaga baxeen.
Maamulka Khaatumo ayaa bilihii lasoo dhaafay sheegayey in magaalada Taleex lagu qaban doono shirweyne lagu magacaabi doono maamul rasmi ah ee Khaatumo.
Horey ayey u jirtay khilaaf xoogan oo soo kala dhexgalay madaxdii sare ee maamulka Khaatumo, waxaana labo kamid ah sadexdii Madaxweyne ee Khaatumo ay hada kamid yihiin Xukuumada cusub ee Puntland.
Madaxweynaha Puntland Prof.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa horey ugu dhawaaqay shirweyne isugu imaan doonaan beelaha wada dhistay Puntland oo ay ku jiraan issimadii wax ka dhisay maamulka Khaatumo, si loo saxo khaladaadkii hore isla markaana looga shaqeeyo dib usoo celinta deegaanada uu la wareegay maamulka Soomaaliland.
Walow qaar kamid ah issimada deegaanada Sool iyo Cayn ay taageereen fikirka Madaxweynaha Puntland ayaa hadana waxaa arrintaasi si weyn uga biyo diiday hogaamiyaha Khaatumo Maxamed Yusuf Indhosheel oo dhawaan booqasho ku tagay magaalada Muqdisho, Indho-sheel oo hada ku sugan Taleex ayaa sheegay in loo baahan yahay dhismo maamul Khaatumo oo dhameystiran kaasi oo leh Baarlamaan iyo Xukuumad.